देउवा र पौडेलले विश्राम लिनुपर्छ, अबको सभापति म हो : डा. शशांक कोइराला - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७५ कार्तिक १६ गते ११:१९ मा प्रकाशित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला अलमलमा छ । प्रतिपक्षी दलको भूमिका एकातिर छ भने पार्टीको आन्तरिक समस्या अर्कोतिर । अहिलेको नेतृत्व नै असफल भयो भन्ने टिप्पणी भइरहँदा आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा को आउला भन्ने चासो त्यत्तिकै छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग कुराकानी गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
महाधिवेशन अगाडि कसरी एक हुन्छ कांग्रेस ? केके आधार छन् ?
महाधिवेशनका बेला चुनाव लड्नका लागि केही धु्र्रविकरण हुन सक्छ, जुन स्वभाविक हो । तर महाधिवेशनपछि पार्टी एक हुन्छ । तपाई ढुक्क हुनुस् । हामीहरु कम्युनिष्टसँग जुध्नुछ । त्यसका लागि हामी एक हुनैपर्छ ।
सकेसम्म एक जना मात्रै बन्छौँ । यसका लागि हामी तीन जना बसेर छलफल गर्छौँ । सुजाताको स्वास्थ्यले दिदैन । शेखर दा र ममध्ये एक जना उम्मेदवार बन्छाँै ।
सरकारलाई दुई तिहाईको दम्भ छ । बलात्कारको यति धेरै घटनाहरु भइरहेका छन् । खै सरकारको प्रभावकारिता । नौ महिना भइसक्यो, ५ वर्षमा केके काम गर्ने भन्ने खाका नै छैन । पहिलेदेखिकै खाकालाई पछ्याईरहेका छन् । विगतमा पनि कम्युनिष्टहरु सरकारमा थिए, के काम गरे ? अहिले मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । कुखुरा बेच्नेलाई पनि कर लिएर देश विकास हुन्छ । कांग्रेस सरकारमा भएको भए यि समस्या हुँदैनथिए ।